Ibhanti yokuhambisa yeyona ndawo iphambili yokuhambisa ibhanti. Isetyenziselwa ubukhulu becala ukuthuthwa okuqhubekayo kumalahle, imigodi, isinyithi, imichiza, ulwakhiwo kunye namacandelo ezothutho. Izinto eziza kuthuthwa zahlulwe zaziibhloko, umgubo, iipasta kunye namaqhekeza. Izinto njl.Ibhanti lokuhambisa ikakhulu lenziwe ngamacandelo amathathu: izinto zesakhelo, umaleko wokugubungela kunye nezinto zokwenza ibhotile, ekugubungela umaleko kunye nobume besakhelo zezona ndawo ziphambili zichonga ukusebenza kwazo.
Ngokwezixhobo ezahlukeneyo ezisetyenziswe kumaleko wokugubungela, inokwahlulahlulwa ibe ziindidi ezimbini: iibhanti zokuhambisa ezinzima kunye neebhanti zokuhambisa ezikhanyayo. Iibhanti ezihambisa umthwalo onzima zisebenzisa irabha (kubandakanya irabha yendalo kunye nerabha eyenziweyo) njengezona zinto ziphambili ziphambili, kungoko zibizwa ngokuba ziibhanti zokuhambisa irabha, kwaye ukusetyenziswa kwazo kugxile kumacandelo oshishino olunzima nolwakhiwo lwezixhobo. Ngokwemisebenzi eyahlukeneyo, iibhanti zerabha zinokwahlulwa zibe ngamabhanti okuhambisa kunye neebhanti zokuhambisa. Le yangaphambili isetyenziselwa ukuhambisa ngoomatshini, kwaye amanzi asezantsi asetyenziselwa ikakhulu amashishini afuna ukuhanjiswa njengeemoto kunye noomatshini bezolimo; le yokugqibela isetyenziselwa ukuhambisa izinto, kwaye eyona mfuno iphambili igxile kwimigodi yamalahle, Amashishini amakhulu amahlanu esinyithi, amazibuko, amandla kunye nesamente. Iibhanti zokuhambisa ezingasasebenziyo ikakhulu zisebenzisa izinto zepolymer, ezisetyenziswa ikakhulu kumabala amashishini amancinci njengokutya kunye nezinto zombane.
Icandelo lebhanti lokuhambisa irabha linembali ende yophuhliso, itekhnoloji evuthiweyo, kunye nonikezelo lwezixhobo kunye neemfuno ezingqongqo zokhuselo lokusingqongileyo kumazwe athuthukileyo. Okwangoku, iindawo zayo zemveliso ikakhulu amazwe asakhasayo. I-China lelona lizwe likhulu elenza ibhanti yokuhambisa ibhanti. ilizwe.
Okwangoku, ishishini lokuhambisa elihamba kwihlabathi likhawulezisa ukudluliselwa kwalo kumazwe asakhasayo.
I-China lelona lizwe liphambili elenza ukuhanjiswa kwemveliso yebhanti yokuhambisa yamazwe aphesheya. Izizathu eziphambili zezi: Iindleko zemveliso yasekhaya ziphantsi kakhulu kunamazwe ahambele phambili; I-China iye yaba yeyona mveliso inkulu yokuhambisa ibhanti yokuhambisa kunye nokusetyenziswa, kwaye inqanaba lokukhula kweemarike lisephambili kwihlabathi. Umzi mveliso webhanti yokuhambisa yasekhaya Ngophuhliso olukhawulezileyo, ezinye iinkampani kolu shishino zikwazile ukuvelisa iimveliso ngokusebenza kunye nokubalulwa okufikelele kwinqanaba eliphambili lamazwe aphesheya, kwaye banakho ukwenza ukuhanjiswa kwemizi-mveliso.
I-China, iBrazil kunye namanye amazwe amatsha asemashishini akwinkqubo yokufudukela kwabantu ezidolophini nakwimizi-mveliso. Uphuhliso olukhawulezileyo lwamashishini abo anzima kunye neekhemikhali lubonelele ngentengiso ekhula ngokukhawuleza kwishishini lokuhambisa ibhanti kwaye litsale iinkampani ezininzi ukungena kumzi mveliso webhanti lokuhambisa. Ezona mpawu ziphambili zentengiso yokuhambisa ibhanti kumazwe asanda kuqhubela phambili kukukhula ngokukhawuleza kweemarike, iinkampani ezininzi zemveliso, kunye noxinzelelo oluphantsi lwemizi mveliso. Okwangoku, amazwe amatsha anefrijini sele engoyena mvelisi kunye nomthengi weebhanti zokuhambisa kwihlabathi. Phakathi kwazo, i-China iye yaba ngumvelisi kunye nomthengi omkhulu weebhanti zokuhambisa, kunye nesiphumo sobalo malunga nesinye kwisithathu semveliso yehlabathi.
Ukuvela kweebhanti ezihambisa iimpahla kunike ukomelezwa okukhulu kwimveliso yezorhwebo kwaye kukhuthaze uphuhliso lwezentengiselwano ubukhulu becala. Wonke umntu kufuneka azi ukuba i-China lilizwe elinemfuno enkulu yeebhanti zokuhambisa, ke ilizwe lethu lilizwe elikhulu kwimveliso yeebhanti zokuhambisa.